လွတ်သွားသောအခွင့်အလမ်းများ '' Thrones ၏ဂိမ်း '' နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဤမူရင်း Amazon ကစောင့်ရှောက် - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment "လွတ်သွားသောအခွင့်အလမ်းများ '' Thrones ၏ဂိမ်း '' နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဤမူရင်း Amazon ကစောင့်ရှောက် - BGR
ပွဲတော်ကြီး Row လက်ရှိအမေဇုံချုပ်အပေါ်ထုတ်လွှင့်အလွယ်တကူ Thrones ၏ဂိမ်းတစ်ခုကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုအစားထိုးထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးတီဗီစီမံကိန်း ။ ဒါဟာအားဖြင့်ကျန်ကြွင်းရစ်သောအပေါက်တစ်ပရိသတ်ကိုရှာတွေ့ဖို့လိုအပျပေါငျးတို့သပါဝင်ပစ္စည်းများရှိသည်ဖို့ပုံရသည် Thrones ၏ဂိမ်း အထူးသဖြင့်အမေဇုံဈေးကွက်ထဲမှာတော်တော်များများပြိုင်ဘက်ကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း - Netflix အဆိုပါ Witcher ဥပမာအားဖြင့်, သာလနှောင်းပိုင်း 2019 စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါး၏ပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ငါသည်သင်တို့ကိုပြောသည် ပွဲတော်ကြီး Row လာမယ့်မဖြစ်လိုအပ်ပါတယ် Thrones ၏ဂိမ်း အောင်မြင်ဖို့ ။ အဲဒီအချိန်မှာကျွန်မပထမဆုံးရာသီရှစ်အပေါ်ငါးခုဖြစ်စဉ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါငါကအခြားသုံးဘို့အမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးရာသီပြီးသွားပြီးနောက် ပွဲတော်ကြီး Row ယခုတွင်ငါသည်ဒီအမေဇုံများအတွက်အကုန်အကျပျက်ကွက်ကြောင်းယုံကြည်မိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကုမ္ပဏီဒုတိယရာသီအတွက်သက်တမ်းတိုးထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီပိုစိတ်ပျက်စရာပထမဦးဆုံးရာသီအပြီးငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းအရာတစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။
ငါပြီးသားကရှင်းပြသည်အဖြစ်, အဘယျသို့ကယ့်ကိုငါ့အအာရုံကိုဖမ်းမိ ပွဲတော်ကြီး Row အဆိုပါ setting ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အမေဇုံမစုံလငျလူနဲ့ဒဏ္ဍာရီကိန်းဂဏန်းများဖြင့်လူနေထူထပ်တစ်ခုရည်မှန်းချက်ကြီးကမ္ဘာမှာကမ်းလှမ်းပေမယ့်အရာရာကိုစံဆယျကိုးရာစုတစ်လန်ဒန်ကမ္ဘာကြီး၌တည်ရှိ၏။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်အလယ်ခေတ်အတွင်းကျင်းပလျက်ရှိသည်သောအခြားစိတ်ကူးပုံပြင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးဒီကဗျာကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမေဇုံဇာတ်လမ်းတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောနောက်ခံအတွက်ဒီစိတ်ကူးကမ္ဘာကြီးကိုကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။
Image ကိုရင်းမြစ်: အမေဇုံ
သုံးဖြစ်စဉ်များရှိပါတယ်, သို့သော်, ငါလာမယ့်ဖြစ်ပျက်ကိုသိရန်စပ်စုခဲ့ပါတယ်။ ငါ၏အကျင့်စာရိတ္တနှင့်ငါ့ဇာတ်လမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအကြှနျုပျနှငျ့အမွကွေီးပျေါမှာကိုဘယ်လိုအံ့သြစိတ်ဝင်စား ပွဲတော်ကြီး Row တစ်စမတ် cliffhanger မျှော်လင့်နေတဲ့သစ္စာစောင့်သိပန်ကာထဲသို့အကြှနျုပျကိုလှည့်။
ဒါဟာကျနော်တို့ကယ့်ကိုတစ်စက္ကန့်ရာသီမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့ရှုပ်ထွေးရာဇဝတ်မှုဇာတ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမြင်တွေ့ကြောင်းထွက်လှည့်။ ငါချစ်ဟယ်ရီပေါ်တာ၏ထူထပ်အားလုံးအပြီးဒါမှောင်မိုက်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဖီလို (Orlando Bloom) သူစိုက်ပျိုးနိုင်အချို့သောဒုက္ခမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုရှာတွေ့သူအပေါ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကိစ္စတွင်ဖြေရှင်း။ ဝက်နတ်သမီးပုံပြင်နှင့်တစ်ဝက်လူ့ - - ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဘယ်တော့မှခဲ့သူတစ်ဦးစွန့်ပစ်ကလေးကကျနော်တို့ကတစ်နှစ်ခွဲ-အသွေးတော်ဖြစ်ခဲ့သည်သိတယ်။ သို့သော်သူသည်လူကြမ်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အားအဖြေကိုရတယ်ထားပါတယ် ပွဲတော်ကြီး Row ယခုကွယ်လွန်, ရဲကိုသတ်ချင်တယ်။ ယခုပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကွောငျးနှင့်ဖီလိုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်, စီးရီးမှငါ့ကိုကော်မအစစ်အမှန် cliffhanger လည်းမရှိ - ငါငါစီးရီးမှတဆင့်ခံစားခဲ့ရဘူးမကြိုက်ဘူးရဲ့ ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်စွန့်လွှတ်နိုင်ဘူး။
စတော့အိတ် Image ကိုရင်းမြစ်: အမေဇုံ
ဒါဟာ (အားလုံးအနက်ရောင်မှော်ချက်ပြုတ်နည်းများ၏အမြိုးမြိုးသို့မဟုတ်အဓိပတိအဗရှလုံ (ယာရက် Harris က) နှင့်သူ၏ဇနီးဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုဖွဲ့အစီအမံဖို့ရှိမရှိကတော့စုန်းနိုင်ခဲ့, စီးရီးစဉ်အတွင်းငါ့ထံသို့အရှိဆုံးအရေးပါသောဇာတ်ကောင်အချို့ယခုသေကြောင်းကိုမကူညီဘူး အင်ဒီရာ Varma), လုပ်ကြံခံရကြံစည်မှုဆက်စပ်နှစ်ဦးစလုံး။ အဗရှလုံသည်အမြဲတမ်းဖီလို၏ဖခင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်းဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုအတွက် Row populate ကြောင်းဒဏ္ဍာရီမျိုးစိတ်ကိုမုန်းသောသူအဗရှလုံ၏အဓိကနိုင်ငံရေးအပြိုင်ဘက်အတိုက်အခံ Burgue ၏ပါတီခေါင်းဆောင်နှင့်အတူဇာတ်ခင်းနေတယ်။ ဤသည်ဆက်သွယ်မှုတစ်ဦးကိုယ်ဝန်ရှိမှဦးဆောင်; ထို့အပြင် (Arty Froushan နေဖြင့်ကစားယောန,) တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်, အ chancery Burgue အမှခေံ။ ထိုသို့မကြာမီဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုသူမ၏ခင်ပွန်းရှာဖွေတွေ့ရှိအဖြစ်နှစ်ပေါင်းသူမ၏တွေ့ဆုံမီ, အမှတ်တမဲ့နေတဲ့ bastard ဖခင်ခဲ့ကြောင်းသူမကရွေ့လျားမှုအတွက်၏စီးရီးအတွက်အလိုအရှိဆုံးလူသတ်သို့အသွင်ပြောင်းအဖြစ်အပျက်များတစ်စီးရီးသတ်မှတ်ထား Burgue ။ မြို့တော်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုခင်းလှိုင်းပေါ်အာရုံစူးစိုက်စဉ်တွင်တစ်ဦးအစွန်းရောက်ဘာသာရေးအုပ်စုတစ်စုတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ဦးသေဆုံးပြီး Burgue တစ်ခု Message ပေးပို့ဖို့ကြိုးစားနေ, Puck အဓိပတိပစ်မှတ်ထား။
ရာဇဝတ်မှုများ၏သမိုင်းကိုတကယ်ကူညီပေးခဲ့တယ်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးဂျက်-The-Ripper စတိုင်ကဘာလဲ ပွဲတော်ကြီး Row ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုမဏ္ဍိုင်အောင် Thrones ၏ဂိမ်း ။ ငါစိတ်ကူးယဉ်အမေဇုံဖြစ်ဘူးကပြောသည်ပါပြီ Thrones ၏ဂိမ်း အောင်မြင်ပေမယ့် 1 ရာသီ၏ကြံစည်မှုများကြောင့်တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူဆင့်ကဲအဘို့စီးရီးစတင်ရန် .
။ သတ္တဝါသူတို့ကိုယ်သူတို့မကြာသေးမီဖြစ်ရပ်များအပြီးတွင်တစ်ဦးစုရုံးနေထိုင်ရာပိတ်မိရှာတွေ့သောကြောင့်,] ကျနော်တို့လူသားများနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်အခြားမျိုးစိတ်အကြားနိုင်ငံရေးနှင့်အလားအလာဘာသာရေးပဋိပက္ခရှိသည်။ ဒါဟာဖီလိုအသစ်ကရွေးကောက်ပွဲများအထိအဓိပတိ၏စစ်မှန်တဲ့ဆက်ခံဖြစ်သင့်အထူးသဖြင့်သည်အတိုင်း, အနာဂတ်အတွက်စီးရီးအလားအလာစစ်ပွဲထဲသို့ပဋိပက္ခအသွင်ပြောင်းဆက်လက်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးမရှိချဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်ယောနနဲ့ဆိုဖီကဦးဆောင်ဖီလိုနှင့်အမွမ်းပုံကဦးဆောင်သတ္တဝါများနှင့်လူသားအကြားကိုရာဇပလ္လင်၏ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုဖီပင်ဖြစ်သနည်း အဆိုပါအစ်မ-Jonas, Absolom ပြိုင်ဘက်များ၏အလွန်အမင်းအသိဉာဏ် Machiavellian သမီး။ ကရွေ့လျားမှုအတွက်ပုံပြင်၏ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုလူကြမ်းအသွင်ပြောင်းကြောင်းဖြစ်ရပ်များများ၏ကွင်းဆက်ကိုသတ်မှတ်တော်မူကြောင်းကိုတစျခုဖွစျသညျကတည်းကဒါဟာနောက်ထပ်လွဲချော်ခွင့်အလမ်းဖြစ်သည့်စီးရီးအတွက်နှောင်းပိုင်းကမိတ်ဆက်စကားရှိပါတယ်။
သို့သော်လည်းငါသည်လာမယ့်ဖြစ်ပျက်သင်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားဘူး။ ငါကလည်းသကဲ့သို့ငါအရှိဆုံးဂရုစိုက်သောဇာတ်ကောင်အချို့ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။ ယောနနဲ့ဆိုဖီ, ထွန်းသစ်စလူကြမ်းအဖြစ်အဖြစ်မှာအားလုံးဆွဲဆောင်မှုမရှိကြပေ။ သူတို့ဟာဝက်ညီအစ်ကို, ညီအစ်မတစ်ဦး incestuous ဆက်ဆံရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်ပြိုင်ဘက် / ကနိုင်ငံရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်ကြ - Cersei နှင့် Jaime နှင့်အတူမျဉ်းပြိုင်ဆွဲပါ။ အဆိုပါ Lannister သို့သော်ကောင်းမွန်စွာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ကြသည်။ အများအားဖြင့်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေ, ဟုတ်ကဲ့။ သို့သော် Cersei နှင့် Jaime အစောဆုံးအချိန်လေးထံသို့ပြန်သွားကြသူဇာတ်ကောင်များမှာ Thrones ၏ဂိမ်း 1 ရာသီ။
သင်နောက်ဆုံးသုံးဖြစ်စဉ်များအတွက်အမွမ်းပုံ Stonemoss (Cara Delevingne) ဖြစ်ပျက်အံ့သြနေကြသည်လျှင်, ငါသညျလညျးကစီးရီးအတွက်အဓိကဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပေမယ့်အထူးသဖြင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အလယ်တန်းဇာတ်ကောင်။ ဒါဟာနဂါးဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းမှုလုနီးပါးသေဆုံးသည့်အခါဖီလို၏ဇာတ်လမ်းအထဲကအမဲသားနှင့်သူ၏အသက်အဘို့အကူညီပေးဖို့သာရှိသေး၏။ အရမ်းဆိုး Beacham Delevingne ပိုကောင်းကို arc နှင့်ပိုပြီးတာဝန်အပေါ်အပ်နှင်းမထားပါဘူး။ ငါအရေးကြီးဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ထင် ပွဲတော်ကြီး Row - ကောင်းစွာ, တစ်ဦးနတ်သမီးပုံပြင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး - ပိုကောင်းတဲ့ပုံပြင်နဲ့ပထမဦးဆုံးရာသီနှင့် Delevingne ၏ပိုကောင်းကို arc ဆက်ဆက်အောင်မြင်ခဲ့ကြပါပြီခံထိုက်။ ဩအခြားလွဲချော်ခွင့်အလမ်း။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါ Agreus နှင့် Imogen ကစားသူသည်ဒါဝိဒ် Gyasi နှင့် Tamzin ကုန်သည်ကိုလျစ်လျူရှုလို့မရပါဘူး။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးသည်ကမ္ဘာ့၏အထက်တန်းလွှာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောအခြေခံလောက်ကြီးစွာသောစည်းစိမ်မှထသူတစ်ကျွန်စတင်ခဲ့သောအဝတ်လျှော်သည်။ ဒါကြောင့်သူမနှင့်သူမ၏အစ်ကိုရဲ့နာမအဘို့အများကြီးအခွင့်အလမ်းမရရှိပါတယ်ပေမယ့်သူမ, လူ့ Burgue ၏သြဇာအရှိဆုံးမိသားစုများတစ်ဦးမှသူသည်အမွေခံဖြစ်၏။ သာမန်အခြေအနေများအောက်တွင်, Imogen က၎င်း၏အသစ်သောကြွယ်ဝသောအိမ်နီးချင်း Agreus အဖြစ်သတ္တဝါနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘူး။ ယင်းအဝတ်လျှော်ထိုကဲ့သို့သောအဝတ်လျှော်အဖြစ်သတ္တဝါသေးပိုင်မထားတဲ့မြင့်မားသောလူ့အဖွဲ့အစည်း Burgue မှဝင်ရောက်ခွင့်, ရှိရမည်နေချိန်မှာသူမကငွေလိုအပ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးမျှော်လင့်မထားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းကိုသို့လှည့်သည့်စီးရီးအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးတရရှိခဲ့သည်။ မည်သို့ပါဘူးဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသူ၏ခြုံငုံကြံစည်မှုချိတ်ဆက် ပွဲတော်ကြီး Row ? ဤအမှုကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ မရကယ့်ကို, သူတို့လောကမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအဖြစ်ကိုလက်ခံရမယ်လို့လူများနှင့်ဒဏ္ဍာရီသတ္တဝါများအကြားကြီးမားတဲ့ကွာဟမှုဆေးထိုးခြင်းကိုကူညီ မှလွဲ. ။ အနာဂတ်ကာလ၌, ထိုသူတို့ Burgue ၏ကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတန်း၏သတ္တဝါများငွေကြေးနိုင်ဘူး။
နောက်ဆုံးတွင် ပွဲတော်ကြီး Row ပုံရိပ်ယောင်များနှင့်အံ့သြဖွယ်အထူးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်စူးစမ်းလေ့လာမယ့်ဧရာမပွင့်လင်းကမ္ဘာကြီးလိုပဲ။ အရမ်းဆိုးဇာတ်လမ်းနှင့်ဂိမ်းအခြားအရာအားလုံးအထိနေထိုင်နေကြသည်မဟုတ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုနဲ့တူနေလျှင်သင်ဖြစ်ကောင်းအလွန်လျှင်မြန်စွာသွားပါစေလိမ့်မယ်နှငျ့သငျဒုတိယရာသီပြီးသားဆဲမေ့လျော့ကြလိမ့်မည်။